Wefdi ka socda Maamulka Puntland oo dhexdhexaadin u aaday Degmada Rako – SBC
Wefdi ka socda Maamulka Puntland oo dhexdhexaadin u aaday Degmada Rako
Wararka ka imaanaya Degmada rako raaxo ee Gobolka Karkaar ayaa ku warmaya in halkaasi ay gaareen wefdi ka socda Maamulka Puntland oo ay ku jiraan wasiiro Xildhibaano Salaadiin iyo cuqaal kale kuwaasi oo halkaas u tagey dhexgalida beelo walaalo ah oo halkaas ku dagaalamay.
Wefdiga waxaa hogaaminaya wasiirka Arimaha Gudaha ee Puntland Gen C/laahi Axmed Jaamac Ilkajiir waxaana ujeedka wefdiga ee Degmada lagu tilmaamay sida maamulka puntland uu gacan uga geysan lahaa sidii wada xaajood is isgarad loogu dhameyn lahaa xiisad halkaas ku dhexmartay beelo walala ah.
Deegaanada ay wefdiga tageen ayaa waxaa dhinaca miyiga ayaa todobaadkii hore waxaa ka dhacay Muran dhinaca daaqsinka iyo Biyaha la xiriira oo dhexmaray xooolada dhaqatada Beelaha dagaalamay waxaana xiisadoda hore ay sababtay dhimasho iyo dhaawac labada dhinac ah.
Deegaanada Miyiga ee lagu dagaalamay ayaa waxaa la kala yiraahda uurjire iyo gub waxaana deegaanada xoolahooda daaqsin u geysta Xoolo dhaqato soomaaliyeed oo degan deegaanadaas.
Wefdiga Punland ee haatan aaday Rako waxaa ka mid ah Wasiirka arimaha gudaha iyo dowladaha hoose Gen. C/laahi Axmed Jaamac Ilkajiir Wasiirka wasaarada duulista hawada iyo Garoomada Cali Axmed Gamuute Wasiir ku xigeenka Wasaarada arimaha diinta Maxamuud Xaaji Siciid Xildhibaan Cabdilaahi Sheekh, iyo Suldaan Muuse Axmed Muuse.
Muranka dhinaca daaqsinka iyo Biyaha ayaa mid had iyo goor ay ku dagaalamaan xoolaleyda soomaaliyeed iyadoona ay inta badan ka dhashaan khasaarooyin kala duwan.
bile baaruud says:
Aktoober 7, 2011 at 10:58 am
waa arin fiican in dhexdhexaadin la galo. allaha ku guuleeyo haday niyad ka tahay.
karkaar Axmed says:
Aktoober 7, 2011 at 11:11 am
29-kii bishii september ayaa dagaal ku dhex maray reer miyiga laba beelood oowalaalo ah, waana beesha cali saleebaan iyo muuse saleebaan-Ugaarsaleebaan. dagaalka waxaa qayb ka noqday burcad badeed iyo ciidanka dawladda Puntland oo loogeeyey dhexdhexaadin, laakiin la saftay beesha cali saleebaan. taa waxaa daliil u ah taliya ku xigeenka biliiska puntland muxiyadiin oo xabad joojin ku sameeyey malayshiya ugaar saleebaan, kadibna ay soo galeen burcadbadeedda beesha cali saleebaan iyagoo wata gaadiid fara badan oo ay ka mid yihiin hubkii ay sannadkan dhexdiisii kaga qabsadeen dawladda hulcaanood.halkaas oo ay askar badan oo dawladda ku dileen taliyihiina uu soo baxsaday (A/risaaq Gantaal).
haddaba su’aashu waxay tahay maxaa ku kallifay Tiliye muxiyadiin inuu eexdaas iyo godobtaas ka galo beesha muuse saleebaa?.
su’aasha labaadna waxay tahay muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya Puntland iyo purcadbadeeda waa kan hadda dhexfadhiya burcadbadeedda taliye Muxiyadiin?
su’aasha sadexaadwaxay tahay hubkii burcaddu dawladda horay uga qabsatay ayaa lawataa oo taliye A/risaaq Gantaal looga qabsaday hul caanood,oo weliba la garanayo, shacabkana loo adeegsanyo, marka miyaanay caddayn in Puntland ay godob ka gashay beesha muuse saleebaa iyo guud ahaan shacabka Puntalnd?
waa war xaqiiqo ah oo oo aan caaddifad ku jirin!